Kenya oo Soomaaliya ku celineysa qaar ka mid ah dadkii laga raafay Islii – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Kenya oo Soomaaliya ku celineysa qaar ka mid ah dadkii laga raafay Islii
Nairobi – Mareeg.com: Ciidamada amaanka Kenya ayaa weli wada qabqabashada Soomaalida ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, waxaana wasaaradda amniga guduhu sheegtay in ilaa hadda la qabtay 4000 oo Soomaali ah.
Ciidamada booliska ayaa dadka faraha badan ee la qabtay kala saaraya, iyadoo la hubinayo iney sharci heystaan iyo inkale.
Ilaa 57 Soomaali ah oo la sheeay iney doorteen iney Soomaaliya ku laabtaan ayaa laga saaray garoonka kubadda cagta Kasrani oo dadka faraha badan lagu hayo, waxaana loo qaaday garoonka diyaaradaha si dib loogu celiyo Soomaaliya.
Ma cadda in dadkaas iskood u doorteen iney Soomaaliya ku laabtaan iyo iney arrintaasi ku kaliftay cadaadiska faraha badan ee ay saareen ciidamada Kenya intii xirnaayeen.
Wararka ka imaanaya Nairobi ayaa sheegaya iney weli socdaan howlgallada lagu qabqbanayo Soomaalida, iyadoo dhan kale la sii daayey dad farabadan oo sharciyo heysta.
Ciidamada Kenya ayaan kala soocin dadka waaweyn, dhallinyarada, dumarka iyo carruunta sida uu sheegay xildhibaan laga soo doorto koonfurta Wajeer oo lagu magacaaabo Dhangalow.
Baarlamanka Soomaaliya oo amray hakinta bixinta kaararka aqoonsig Muwaadiniinta